Deg+Deg:- Sidee Ayay U Dhacday Xil Ka Qaadistii Kheyre | Gaaroodi News
Deg+Deg:- Sidee Ayay U Dhacday Xil Ka Qaadistii Kheyre
Kulan hore oo ay baarlamaanku yeesheen
Xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxaa sidii caadiga ahayd saaka ay isugu yimaadeen kulan ay uga doodayeen dhowr qodob.
Waxyaabaha miiska saarnaa waxaa ka mid ah doorashada lagu wado in ay dalka ka dhacdo.
Waxaa sidoo kale xusid mudan in ajandayaasha la qeybiyay uusan qeyb ka ahayn qodobka kalsooni kala noqoshada ra’isul xukuumadda.
Balse waxaa jiray tuhun ay qabeen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka oo ah in la doonayo in codka kalsoonida loo qaada xukuumadda.
Markii uu kalfadhiga billaabmay ayaa waxaa uu gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu soo jeediyay in codka kalsoonida loo qaado xukuumadda rai’sul wasaare kheyre iyadoo aan baarlamaanka la geynin mooshin islamarkaana aan laga doodin.
Mr Mursal ayaa sheegay in codka kalsooni kala noqoshada ay u dhacayso qaab gacan taag ah islamarkana waxaa uu codsaday in inta taageersan kalsooni kala noqoshada ay gacanta taagto.
Gudoomiyaha ayaa ka dib codsaday in inta ka soo horjeeda kalsooni kala noqoshada xukuumadda ay gacanta taagaan. Guddoomiyaha baarlamaanka
Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ka dib waxaa uu ku dhawaaqay natiijada isaga oo sheegay in xukuumaddii ay dhacday.
” Xukuumadda kalsoonida waa lagala noqday, waa dhacday, madaxwaynaha Jamhuuriyadda fedaraalka waa inuu soo dhisaa xukuumad awoodda in wadanka ay doorasho gaarsiiso, kulankana wuu xiran yahay, ” ayuu yiri Mr Mursal.
Buuqii hareeyay baarlamaanka
Intii ay lagu guda jiray howsha kalsooni kala noqoshada xukuumadda ayaa waxaa aqalka baarlamaanka hareeyay buuq iyo sawaxan.
Waxaa la arkay xubno ka tirsan baarlamaanka oo u badan kuwa golaha wasiirada goobta taagan islamarkana qaylinayay.
Xubnaha ka soo horjeeday kalsooni kala noqoshada xukuumadda ayaa waxay isku dayeen in ay is hortaagaan qaadida codka kalsooni kala noqoshada oo ay ku tilmaameen inuu ahaa mid sharci darro ah. Wasiirka amniga dowlada fedaraalka Maxamed Abuukar Islow
Wasiirka amniga dowlada fedaraalka Maxamed Abuukar Islow oo ah xubin ka tirsangolaha shacabka oo maanta joogay ayaa sheegay in wixii baarlamaanka ka dhacay aysan sharci ahayn.
Waxaa uu intaa ku daray in warqadaha loo qeybiyay xubnaha baarlamaanka ay ku qorneyd oo kali ah in doorashada laga doodayo.
“Halkan waxaa ku qoran ajandaha maanta, ka doodista doorasdhooyiinka ku qoran, anaga xan ayaan helnay in gudoonka baarlamaanka ay ku mashquulsan yihiin inay yiraahdaan xukuumaddii way dhacday, ajanda wuxuu soo qoray Faalis ah, ” ayuu yiri Mr Islow
Dhanka kale markii uu gudoomiyaha ku dhawaaqay in xukuumadda xilka lagala noqday ayaa waxaa la arkayay qaar ka mid xildhibaanada oo u dabaaldagayay natiijada.
Buuq iyo sawaxan dheer ka dib waxaa soo xirmay kalfadhiga baarlamaanka.
Markii uu kalfadhiga baarlamaanka soo dhamaaday ayaa waxaa shir jaraa’id qabtay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sh Cabdiraxmaan.
Gudoomiyaha ayaa dhowr qodob oo kalsooni kala noqoshada uu gundhig uga dhigay waxaa ka mid ahaa in xukuumadda ay ku fashilantay diyaarinta hanaan lagu gaarayo doorasho qof iyo cod ah.